Shaqadii gudiyadda oo 5 kamid ah oo loosoo gudbiyay Kiplagat.
Guud ahaan 6da guddi ee arimaha dib u heshiisiinta ayaa loo gudbiyay qoraaladoodii gudoomiyaha gudiga farsamada IGAD ahna ergayga kenya u qaabilsan wada hadaladda nabadda ee dalka soomaaliya.
Gudiyadaas oo ay kamid ahaayeen xalinta khilaafka iyo dib u heshiisiinta, hub ka dhigista, dhaqaalaha, hanti isu celinta iyo axdiga ayaa soo jiitamayay tan iyo 15kii October markii shirwaynaha qaran uu ka furmay magaalada Eldoret ee dalka Kenya.
Marka laga reebo gudiga axdiga ee arimaha dastuurka inta kale waa ay gudbiyeen qoraaladoodii oo haatan loo xilsaaray gudiga Iswaafajinta qoraaladda 6da ah.
Waxaana gudiga axdiga khilaafkiisu uu ku salaysanyahay labo fikrad oo ay kala muujinayaan xubnaha gudigaas oo kor u dhaafaya 30 xubnood waxaa ay ku kala gadisanyihiin qaabka dawlad nimo iyo shuruucda loo dajinayo.
SOMALITALK.COM | March 3, 2003
KIPLAGAT OO HOGAAMIYAYAASHA SOOMAALIYEED UGU BAAQAY SHIR DEGDEG AH OO LAQABANAYO 18ka MAARSO
Shirkaas qododbada looga hadli doono waxaa kamid ah: Qaab shismeedka dawladda Soomaaliyeed iyo sida loo fulinayoI.. GUJI. 15/3
��SRRC oo eedayn Kulul usoo jeedisey DKG
��Cismaan Caato oo Weli diidan SHirka Nairobi
��Shariif Salaan oo Kubaaqay in Laga Soo qayb galo Shirka
��Cawad Cashara: Eedaynta Deriska waxba kama jiraan